Maitiro ekuchinjisa munhu kubva pamubhedha kuenda pawiricheya - Karman Healthcare
Kuchinjisa munhu kubva pamubhedha kuenda ku wiricheya; muchengeti anofanira kunge aripo pamhando iyi chinja.
Dhonza mubhedha wetsiva pasi kusvika kutsoka kumagumo emubhedha. Funga kumunhu ari kuendesa kutarisana kumusoro uye famba kumucheto kwemubhedha panomira muchengeti. Muchengeti anofanira kuisa ruoko rumwe pamusoro pebvi uye rumwe ruoko pasi pefudzi rekunze remunhu.
Kurara pasi kugara pamubhedha
Tanga nekumhanyisa munhu akarara pamubhedha akananga kwauri. Pakupera kweshanduro munhu anofanira kunge akagara kumusoro padivi pemubhedha tsoka dzakatsetseka pasi, akatarisana nemuchengeti. Raira munhu ari kuendeswa kuyambuka maoko ake pamusoro pechipfuva chake kuenda kupa zvimwe kugadzikana.
Ongororazve mamiriro emunhu epfungwa
Ita shuwa kuti munhu wacho ari mune yakanaka mamiriro epfungwa mushure mekunge vapihwa pivoti uye vakagara padivi pemubhedha. Enderera padanho rinotevera rekuti ungachinjisa sei munhu kubva pamubhedha kuenda pa wiricheya.
Kuisa iyo wiricheya uye pekugara
Panguva ino, unogona kubatsira munhu kupfeka shangu dzake kuitira kuti kana vangova pa wiricheya, vakagadzirira kuchovha. Iyo wiricheya chigaro chinofanira kunge chakatarisana nemunhu ari pamubhedha. Izvi zvinofanirwa kubvumidza kuchinjirwa kuve kwakatsetseka kana munhu achinge asimudzwa kubva pamubhedha kuenda mu wiricheya. Ita shuwa kuti mabhureki arikubatanidzwa usati waenderera padanho rinotevera mukuita.
Vanochengeta vanorayirwa kuisa bhanhire rechigaro pachiuno chemunhu, ku zvinopa kutsigira uchisimudza murwere kubva pamubhedha. Mhando idzi emabhanhire echigaro anonzi "Transfer Belts", anogona kutengwa kuburikidza amazon.com kana chero yakafanana webhusaiti.
Chengetedza kaviri wiricheya chinzvimbo
Ino ichave yakanaka nguva yekutarisa kaviri chinzvimbo che wiricheya usati waenderera mberi, ita shuwa kuti wiricheya iri yakatarisana nemurwere uye yakaiswa padyo padyo chinhambwe chinokwanisika kumurwere nemubhedha.
Kugara wakananga uye kumberi padivi pemubhedha
Raira munhu kuti azvimise padivi pemubhedha kuitira kuti vatarisane nenzira yavari, varaire kuti kusunda makumbo avo nemakumbo pamwechete kuitira kuti kana iwe uri mukuita kwekuvachinjisa, unenge uri panzvimbo iri nani yekuchinja mafambiro uye kufamba kwemunhu.
Zvimise pamberi pemurwere, uye isa tsoka yako yepamusoro pamberi pehombodo dzavo, kuitira kuti kudzivirira murwere kubva mukutsvedza pamubhedha achifambisa.
Mumwe ... Vaviri ... Vatatu!
Nzira yakapusa yekugadzirira munhu kuendesa ndeye kuverenga kusvika kumatatu (kana chimwe chinhu chakafanana), kuitira kuti murwere uye muchengeti ave mu-synch achifambisa kubva pamubhedha.
Muchengeti anofanira kuisa maoko ake pazasi pemawoko emurwere, panowanikwa maoko avo pasi pemaoko, kumisa ruoko rweruboshwe kuruboshwe pasi peruoko, neruoko rwerudyi kurudyi kwemurwere pasi peruoko. Paunenge uchinge uri pachinzvimbo, raira murwere kuti aise maoko ake pamusoro pemapfudzi ako, kuitira kuti vashandise muviri wako sekutsigira paunenge uchichinjisa.
Kana muchengeti uye murwere vangoiswa sezvakarairwa pamusoro, unogona kuvazivisa kuti urikusimudza miviri yavo nekumisikidza musana wavo kuchigaro chechigaro. wiricheya.
Chinjana Belt uye Grip
Zvino, isa maoko ako pa "transfer bhandi" rakaiswa pachiuno chemurwere. Kana pasina bhandi repachigaro riripo, unogona kuisa maoko ako pamativi ese emunhu akabata zvakakwana kuti uvabate uchivatamisa.
Rangarira kugara uchisimudza kushandisa musana wako kuburitsa rutsigiro rwakakwana kusimudza huremu hwemunhu kubva ned uye kuvanoisa pachigaro che wiricheya.
Ita shuwa iwe unosimudza miviri yavo kune yakakwira kukwirira kupfuura chigaro cheiyo wiricheya. Ichi chichaita zvinopa imwe nzvimbo yechiito chekutenderera panguva yekuchinjisa.
Iwo mafambiro epivot anofanirwa kukwirana mumutsetse wakaenzana wakaringana seyemaoko e wiricheya.
Uye ndiwo maitiro aunogona kunyatso chinja munhu kubva pamubhedha wake uye kupinda kwavo Karman Wiricheya!
Karman Healthcare inopa yakasarudzika maficha pane zvedu mavhiripu, uchibvumira vanhu kuti vawane iyo wheelchair yakakwana zvavo.
Kana iwe uchingogara uchifanira kubuda kubva pamubhedha uye kupinda mu wiricheya, kana kubva pamotokari kuenda ku wiricheya, kana chero mhando yekuchinjisa, iwe unofanirwa kutsvaga ruzivo rwekutenga wiricheya iyo inouya yakajairwa nemafiripi kumashure mawrestrests, kana mabhureni anobviswa. Izvi zvinofanirwa kukubatsira iwe neanokuchengeta kuti mutamire nyore mune chero mamiriro ezvinhu.
Ichi chinyorwa ndeche nzira yakadzidza yekuendesa munhu kubva pamubhedha kuenda pa wiricheya, ndeyezvinangwa zvekudzidzisa chete. Karman Healthcare haina mhosva kune chero mhando ye kuipa izvo zvinogona kuitika uchitevera iyi mirairo, zvakasununguka zvichibva paCNA mamiriro ebvunzo nyika yese.
LAX Kupfura Nhasi: Gunman anovavarira TSA maAgents